Isku daygii dil ee Taliyaha Ciidamada Burundi | Saxil News Network
Isku daygii dil ee Taliyaha Ciidamada Burundi
Burundi (Saxilnews.com)-Taliyaha Guud ee Ciidamada Burundi ayaa ka bad baaday isku day lagu qaarijin rabay, xilli kolonyo uu la socday oo marayay wado aad u mashquul ah oo ku taal Caasimada Bujumbura lagu weeraray. General Prime Niyongabo ayaa ku sii jeeday xafiiskiisa subaxnimadii hore, waxaana weeraray ciidamo dhar milateri xirnaa.
Taliye kuxigeenka Booliska Gen, Godefroid Bizimana ayaa u sheegay AFP in Taliyaha uu ka bad baaday weerarkaas, uuna bad qabo. Saraakiil ciidan iyo la taliyeyaal aad ugu dhowaa Madaxweynaha Burundi ayaa la dilay bilihii la soo dhaafay.
Dilalka qorsheysan ee ka dhacay dalka Bujumbura ayaa loo aaneynayaa xasilooni darida siyaasadeed ee dalkaas lugala la galay wixii ka dambeeyay banaan baxyadii dhacay bishii April ee sanadkan. Qalalaaso ayaa ka socday dalka Burundi, tan iyo bishii April, markii Madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ku dhawaaqay in markii saddexaad uu isku soo taagayo Madaxtinimada, inkastoo markii dambe ku guuleystay. Bishii May ayay aheyd markii uu ka bad baaday afgambi la doonayay in xukunka lagaga tuuro.